MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄
ကာတွန်း ကိုခေတ် - ဟုတ်ကဲ့ပါ မေမေ
>Irrawaddy Show visited with Suu
>the lion escaped from the cage
၀င်း​မောင်​ - နိုင်​ငံ​ရေး
>88 - 20 years after - The Writers
>Rangoon Street Journalist - News on 1st Week of Dec 2009
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၅) – အကန့်အသတ်များကို ကျော်လွန်ခြင်း Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval Noah...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Caught Red Handed
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Caught Red Handed (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ Tags: ရွှေမိ...
ထွန်းခိုင်၊ ဝင်းနန္ဒာ ● ဘဏ်ချေးငွေနှင့် စစ်ဆေးဆဲ ဘီလီယံ ၂ဝ ကျော် အရှုပ်တော်ပုံ Myanmar NOW (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်း နံနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ဦးတင်ဝင်းနှင့်...
စိုးခိုင်ညိန်း ● ရေးလို့ မကုန်နိုင် မပြီးနိုင်တဲ့ ကဗျာ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂ဝ၁၉ လူတယောက်အကြောင်းကို ကဗျာတွေ စာတွေ ဖွဲ့နွဲ့ဖို့ ဆိုရန်မှာ ထိုလူတယောက်သည် ကြီးကျယ်ခန်းနား လေးစားအပ်တဲ့ လူတယောက်ဖြစ်ဖို့...
ကာတွန်း ဘီရုမာရဲ့ အောင်ဆန်းကိုသတ်တာ ဘယ်သူလဲ? (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်များ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) – ဒေါ်နယ်ထရမ့်၏ ဒီမိုကရေစီဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်များ ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးခြင်းအကြောင်းများ – အခန်းဆက် ၂၆ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၉ Steven Levitsky နှင့် Daniel...
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၆ )
အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၂ ၆ ) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊...
သာထက်အောင် – လူရောင်စုံ၊ ဘ၀ရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ
သာထက်အောင် – လူရောင်စုံ၊ ဘ၀ရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ အလုပ်ကနားပြီး ပင်စင်နာဘ၀ရောက်တော့ အချိန်အတော်များများ ပိုလာပါတယ်။ ငယ်စဉ် အလုပ်ရှိတုန်းကတော့ အလုပ်သွားလိုက် ပြန်လိုက် ၀ယ်လိုက် ခြမ်းလိုက်...
သန်းဝင်းလှိုင် – သူရရွှေမန်းကို လေ့လာခြင်း (၂) (မိုးမခစာအုပ်စင် ကောက်နုတ်ချက်) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၉ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ အကွဲအပြဲ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ပြည်ခိုင်ဖြိုး) ပါတီသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင်...
ခင်မို့မို့လွင် ● ကြမ္မာငင်ခဲ့တဲ့ မြိတ်ကျွန်းစုအပျော်ခရီး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ရန်ကုန် – မြိတ်မြို့ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုမှ ထွက်ခွာလာအပြီး သုံးနာရီခန့်အကြာမှာပင် ‘ဒုတ်’ခနဲ အသံတစ်သံကို ကြားလိုက် ရပြီးနောက် မယုမိစံ တို့စီးနင်းလာသည့်...
ထက်ခေါင်လင်း ● ရုပ်တုကို စိုက်ထူဖို့ ညွှန်ကြားချက် ဘယ်တုန်းကမှ မထုတ်ခဲ့ပါဘူး
ထက်ခေါင်လင်း ● ရုပ်တုကို စိုက်ထူဖို့ ညွှန်ကြားချက် ဘယ်တုန်းကမှ မထုတ်ခဲ့ပါဘူး (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ် စိုက်ထူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကရင်နီလူငယ်များက ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြနေကြရာ ဖေဖော်ဝါရီ...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ပြည်ထောင်စု
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ ပြည်ထောင်စု (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
စိုးနောင် (မုံရွာ) ● ရန်ကုန်မြို့မှာ (၂)
စိုးနောင် (မုံရွာ) ● ရန်ကုန်မြို့မှာ (၂) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ကောင်းကင်ဟာ မီးခိုးမှိုင်းစွဲနေတဲ့မျက်နှာကျက်ကြီး။ မနက်မှာအလုပ်သွားသူတွေက ထဘီရှည်နဲ့ ညမှာအလုပ်သွားသူတွေက စကတ်တိုနဲ့ ရန်ကုန်ညတွေဟာ ရန်ကုန်နေ့တွေထက်ပိုပူလို့လား။ အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို သစ်ပင်တစ်ပင်လို့ရေတွက်ရင်...
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗိုလ်ချုပ်
ကာတွန်း ATH ရဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဗိုလ်ချုပ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်စွမ်းရည် – သမီးလှကျော်ဇောရေးတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောအကြောင်း(ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်) အတွဲ(၂)
မောင်စွမ်းရည် – သမီးလှကျော်ဇောရေးတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောအကြောင်း(ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်) အတွဲ(၂) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာ “ရဲဘော်သုံးကျိပ်” တို့ရဲ့ သမိုင်းဟာ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်တွေဟာ ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့...
ဇင်လင်း ● ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဘာကြောင့် နီးလျှက် ဝေးနေရသနည်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကို စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့် လေ့လာနေကြသော ပြည်သူတို့အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် မည်သူတို့က...
ကိုသန်းလွင် ● ဒီဂျစ်တယ်ခေတ် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ
ကိုသန်းလွင် ● ဒီဂျစ်တယ်ခေတ် အစိုးရနှင့်ပြည်သူ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၉ (၁) နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ကာလအတွင်းမှာပင် ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ မရှိမဖြစ်သည့် အရာတစ် ခုဖြစ်လာခဲ့ပါ သည်။ ဤတော်လှန်ရေး၏...
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၉၅)
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလို ရေးပါမည် (၃၉၅) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ မကျက်တစ်ကျက်ပေါင်မုန့်ဟု အခေါ်ခံရသူ မင်းသုဝဏ် (၁) ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ကျွန်တော် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရောက်လာပြီးနောက် မကြာမီဆိုသလို...
မောင်ဆောင်းခ ● ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများဆီကရရှိခဲ့သော အတွေးများ
မောင်ဆောင်းခ ● ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုများဆီကရရှိခဲ့သော အတွေးများ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ ၂၀၁၈ မိုးမခ သြဂုတ်လထုတ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ခုနှစ်၊ ပင်လုံညီလာခံ၌ ချုပ်ဆိုခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်ထဲတွင် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့မှ...
ကျော်ဟုန်း ● ဣတ္ထိယကို တူးဖော်ခြင်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ သူ့နှုတ်ဖျား စကားဟာ သူ့ မုဒြာပါပဲ။ ပန်း ဖြစ်နိုင်သလို ယမ်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူ့မာယာမှာတောင် သူ့ချစ်ခြင်းတွေနဲ့...
ရန်လင်းအောင် ● မနက်ခင်းကောင်းကောင်း
ရန်လင်းအောင် ● မနက်ခင်းကောင်းကောင်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ အားလုံးဝိုင်းအောင်ရေးတယ်ပြောမှာပဲ “ဆုံးရှုံးခြင်း” သံစဉ်ကိုတီးခတ်လို့ – ငါဘာကောင်လဲကို အချောသတ်အောင် လိုက်သတ်ကြ။ လက်ဖြောင့်ဖြောင့် အသက်ရှူဖြောင့်ဖြောင့် လွယ်တော့မလွယ်ဘူး နာမည်လှလှပေးတတ်သူတွေနဲ့ ရန်ငါပြတ်ဖို့လည်းလိုတာပေါ့။...
မောင်ကြူးရင့် ● မီးရှို့ရမယ့် မိစ္ဆာတကောင်
မောင်ကြူးရင့် ● မီးရှို့ရမယ့် မိစ္ဆာတကောင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၉ ဒီစာအုပ်ဟာ မိစ္ဆာတကောင်ပဲ မကောင်းဆိုးဝါးပဲ။ ဒီစာအုပ်ဟာ လောကအတွက်အသုံးမဝင်တဲ့ အသုံးမတည့်တဲ့စာအုပ်ပဲ။ ဒီစာအုပ်က လူတွေကိုဗြောင်းဆန်အောင် လူတွေကိုအကျဉ်းအကြပ်ထဲရောက်အောင် ကသောင်းကနင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်...
နိုင်ဝင်းသီ ● ပင်လယ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ ညက ပိုပြီးအေးစက်လာသည်။ လှိုင်းရိုက်သံတွေက ပို၍ကျယ်လောင်လာသည်။ နှင်းမြူနှင့်လရောင် အရောရောအထွေး ထွေးဖြစ်နေသောညထဲသို့ မွှေးရီသောရနံ့တစ်ခုက စီးလွင့်မျောပါလာသည်။ ပုန်းညက်ပန်းရနံ့တွေများလား။ ပြန်တော့မည့်ည ဖြစ်လို့နှင့်တူသည်။...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – စစ်ရေးအမြင်ရှိမှ စာရေးပါ
ကာတွန်းမောင်ရစ် – စစ်ရေးအမြင်ရှိမှ စာရေးပါ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ စင်ကာပူကို ကျော်ခဲ့သူ … (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် Related posts ကာတွန်း ရွှေဗိုလ်ရဲ့ပေါက်ဖော်တို့ရဲ့ တောင်းဆိုသံ (0) ကာတွန်း...
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၄) – မျိုးရိုးဗီဇများ၏ အကန့်အသတ်ကို ကျော်လွန်ခြင်း
မာန်သီဟထွန်း – ဆေပီယန်စ်၊ အပိုင်း (၁၄) – မျိုးရိုးဗီဇများ၏ အကန့်အသတ်ကို ကျော်လွန်ခြင်း Sapiens – A Brief History of Humankind by Yuval...
ဆောင်းယွန်းလ ● ကမ္ဘာပတ်ပြီးဖတ်မိတဲ့ စာမျက်နှာများ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၉ ဝိုင်ယာကြိုးတွေနဲ့ ရှုပ်ပွေနေတဲ့မြို့ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြနေတာဘဲ ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် လက်ညှိုးထိုးမလွဲတဲ့ ကွမ်းသွေးတွေအပြည့်နဲ့ တိုက်နံရံတွေပေါ်က နေပူစာလှုံနေကြတဲ့ အဝတ်အထည်များ အပူရောင်သမ်းနေသူ လူတွေက...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Neck & Neck
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Neck & Neck (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈၊ ၂၀၁၉ Tags: ရွှေမိ...
ကိုသန်းလွင် ● မြေကြီးထဲသို့ကျွံဝင်နေသော တီဟီရန်မြို့တော်
ကိုသန်းလွင် ● မြေကြီးထဲသို့ကျွံဝင်နေသော တီဟီရန်မြို့တော် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂ဝ၁၉ (၁) ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြေကြီးထဲသို့ကျွံကျနေသော မြို့ကြီးများမှာ အနည်းဆုံး ၁ဝ မြို့ထက်မနည်းရှိပြီး အဆိုးဆုံး ၅ မြို့မှာ ဂျကာ...
ကေဇော်မိုး ● အိန္ဒြာ​ကျော်​ဇင်​စကိတ်​စီးတုန်းက ငါတို့ဟာ မီးကုန်​ယမ်းကုန်​ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၉ ​ရှေ့မှာပြသွားတဲ့ သီအိုရီအတိုင်းပဲ အဲ့ဒီရနံ့က အ​တွေးထဲ အလံကိုလာလှုပ်​ခတ်​တယ်​ ငါ့ အ​ဘေး ငါ့ အဘိုး ငါ့...
Page 1 of 94712345...947»